Fitaovam-panamafisam-peo aforitra ho an'ny fanoratana fako China Manufacturer
Description:Fitaovam-panamafisam-peo manga,Fitaovam-panamafisam-peo fanenon-davenona,Sela fitaratra vita amin'ny S-Brilliance ho an'ny lalana famantarana
Home > Products > Sela Brilliant Glass > Fitaovam-panamafisam-peo aforitra ho an&#39;ny fanoratana fako
Model No.: Screen Materials Glass Beads
Screen Fitaovana hisainana Glass vakana for Lampivato marika
Ny mari-pamantarana goavana sy ny lalamby dia mampiasa karazana loko sy fitaovana manokana. Ny ankabeazan'ny loko marevaka sy ny fitaovana fametrahana marika hafa (PMM) dia misy perla-jiro an'arivony lavitrisa metatra eo ho eo izay mifatotra amin'ny làlambe miaraka amin'ny bindery mafy. Raha tokony hanaparitaka ny hazavana, toy ny loko voajanahary, ny loko mibontsina izay misy perla glass dia manodina ny hazavana ary mamerina izany amin'ny làlana ifantohanao.
Sela Mpanjifa S-Brilliance ho an'ny marika famantarana marika
Ny fitaovana Glass Glass dia azo avy amin'ny firenena na faritra, toy ny EN1423 / 1424, AASHTO M247, BS6088, JIS R3301 ary KS L2521 etc.
Ny CHIYE GLASS BEAD (HEBEI) CO., LTD dia natsangana tamin'ny taona 1998. Nandritra ny fitarihana ny filoha Wenjie Liu sy ny ezaka tsy nitaky ny mpiasa rehetra, dia namboarina avy amina orinasa tsy miankina iray ho perla vita amin'ny perla vita amin'ny vera. Ny orinasa dia manana orinasa famolavolana tetikasa mihoatra ny 38, fa tsy ny singa voalohany tamin'ny vokatra 200.000MT. Ny fitaovana fametrahana stereo ho an'ny stereo lehibe indrindra, rafitra feno automatique, rafitra sy famolahana, dia tanteraka tanteraka ny famokarana sy ny fitantanana automatique. Ny orinasa dia manana ny laboratoara fikarohana tanteraka indrindra ary afaka manatanteraka tsy tapaka ny endriky ny fanandramana finday rehetra mba hamenoana ny teknolojia vaovao sy ny vokatra vaovao.
Fitaovam-panamafisam-peo manga Fitaovam-panamafisam-peo fanenon-davenona Sela fitaratra vita amin'ny S-Brilliance ho an'ny lalana famantarana Fitaovam-panamafisam-peo any Eoropa Fitaovam-panamafisam-peo ho an'ny Highway Fitaovam-pitaterana lalana Toeram-pandaharam-be miloko marefo Fiarovam-bovoka matevina